सांसद डा. संग्रौलाद्वारा विराटनगरको साख जोगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले विराटनगरको साख जोगाउन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले प्रदेश १ को हबको रुपमा रहेको विराटनगरले विभिन्न समस्याका कारण आफ्न ओसाख जोगान संघर्ष गरिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
उनले विद्यमान समस्याको हल गर्नका लागि विराटनगर महानगर र प्रदेशको बजेटले मात्र सम्भव नभएको भन्दै केन्द्रको दुरदृष्टि पुग्न जरुरी रहेको बताएकी छन् ।
सांसद संग्रौलाले संसदमा उठाएको विषय :
हिमाल पहाड र तराईको संगम स्थलको रुपमा प्रदेश नं. १ रहेको छ । विश्वलाई चिनाउने सगरमाथा, कंचनजंघा जस्ता हिमशिखर र किराँत धर्मालम्वीहरुको थातथलो एवं सम्बृद्धि र बिकासका थुप्रै संभावनाहरु बोकेको यो प्रदेशले बिकासमा फड्को अझै लिन सकेको छैन । हामीहरुले यस क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा विकास गरी आत्मनिर्भर हुने अर्थ व्यवस्था बनाउन सक्दछौ । जलश्रोत, वन जंगल, जडीबुटी विभिन्न सम्पदाहरुको प्रशस्त संभावना भएको हुनाले १ नं. प्रदेशलाई १ नं. कै मोडलको रुपमा विकास गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछु ।
प्रदेशको राजधानीको रुपमा रहेको मोरङ्गको बिराटनगर एक राजनैतिक, औद्यौगिक, एवं शैक्षिक हबको रुपमा चिनिन्छ । यस्तो सुपरिचित बिराटनगरलाई आफ्नो साख जोगाउन कठिन रहेको छ । विद्यमान समस्याको हल गर्नका लागि बिराटनगर महानगर र प्रदेशको बजेटले मात्र सम्भव छैन । केन्द्रको दुरदृष्टि पुग्न जरुरी छ ।
बिराटनगर औद्योगित साख फिर्ता गर्ने ठुलो चुनौती छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग बसालेको हिजो मिल्स एरिया भनेर पहिचान बनेका ठाउँमा अहिले उद्योग चल्दैन खण्डहर बनेका छन् । मुलुकको पहिलो उद्योग जुटमिल बन्द छ । त्यहाँका मजदुर एवं कामदारहरु बिचल्लीमा छन् । औद्यौगिक करिडोरको रुपमा परिचित बिराटनगरका उद्योगीहरु विषेश गरि सरकारले ल्याएको पछिल्लो कर नीतिका कारण सुनसरी मोरङ्ग करिडोरका धेरै उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योग बचाउन सरकारले विषेश योजना संचालन गर्नुपर्दछ । कृषि अग्रणी प्रदेश भएर पनि कृषिमा आधारित उद्योग संचालन नहुँदा प्रदेशको ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो अवस्थामा पुगेको छ । युवालाई नव प्रविधिमा अधारित कृषि उद्यममा जोड्नु पर्दछ ।
प्रजातन्त्रीक आन्दोलनको शंखघोष गर्ने हड्ताली हाट सुनसान छ । यस क्षेत्रको उचित संरक्षण गरि नयाँ पुस्तालाई बिराटनगरमा उठेको राजनितिक आन्दोलनबारे जानकारी दिन हड्ताली हाटलाई खुला संग्रहालयको रुपमा बिकास गरिनु पर्दछ ।
बिराटनगर विमान स्थलको स्तरउन्नतिका लागि काम थालिनु पर्दछ । रोकिएको टर्मिनल भवनको निर्माणको प्रक्रिया तुरुन्त सुरु हुनु पर्दछ । जग्गा रोक्का भई लामो समय देखि मुआब्जा नपाएका र सडक संघर्षमा उत्रिएका स्थानीयको माग तुरुन्त पुरा गरिनु पर्दछ ।
बिराटनगरमा बाढी र ढुवानको समस्या दिर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सिंघिया, केसलिया तटबन्धन र ग्रीनवेल्टको कामलाई अघि बढाउन आवश्यक छ ।
बिराटनगरमा पछिल्लो समय निर्माण भएका सडक नाला तथा सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षणमा जनसहभागिता सहित काम अगाडी बढाउन पर्दछ । फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउँदै ल्याण्डफिल साइड संचालन गर्न पर्दछ । कोशी अस्पताललाई प्रादेशिक स्तरमै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी स्तरउन्नतीको कामलाई गति दिन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश नं. १ मै बलात्कारको घटना बढेको पाइएको छ । बालिका समेत अपराधको सिकार बनिरहेका छन् । मोरङ्गमा बढ्दो बलात्कारको घटनाको सुक्ष्मअध्ययन गरी दोषीलाई कडा भन्दा कडा कार्यवाही गरिनु पर्दछ । खुल्ला सिमानाका कारण चेलिबेटि बेचविखन लागुऔषध दुव्र्यसन पनि बढ्दो अवस्थामा छ । यी सबैको न्युनीकरण गरि समाधान गर्न सरकारको ध्यानकार्षण गर्दछु ।
पौराणिक कालको बिराट राजाको दरवार पुरातात्विक उत्खनन्बाट प्रमाणीत भईसकेको छ । यसको भग्नावषेशको संरक्षण र संवर्धण गरि पर्यटकिय स्थलको रुपमा बिकास गरिनु पर्दछ ।
पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै एमविविएसको पढाईलाई संचालन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछु ।
काठमाडौँ । बेलायतमा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदहरूले गरेको विद्रोहपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन समस्यामा परेका छन् । २४ घण्टाभन्दा कम अवधिमा ३९ मन्त्री र संसदीय सचिवले राजीनामा दिएका छन् । यति मात्र
अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा बोल्दा एमालेको बैठक बहिष्कार
काठमाडौं । नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बोलिरहेको बैठक बहिष्कार गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएपछि सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई बोल्ने अवसर दिएपछि एमालेले विरोध गर्दै बैठक
अर्थमन्त्रीलाई संसदमा बोल्ने नैतिक अधिकार छैन- एमाले
काठमाडौं । नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बोल्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीको बारेमा संसदीय विशेष समिति गठन भएपछि अब